သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများ - Mibond စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအချို့
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာအချို့အမျိုးအစားများ
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2022-01-03 မူလ:ဆိုက်ကို
Wood cutting tools များတွင်လျှပ်စစ်နှင့်လက်စွဲဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများပါဝင်သည်။selecti၏သစ်သားပြုပြင်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သောလျှပ်စစ်ကိရိယာများသည်လုပ်ငန်းခွင်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုထိရောက်စွာတိုးတက်စေနိုင်သဖြင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဖြတ်တောက်ခြင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအပြည့်အဝနားလည်ရန်အလွန်လိုအပ်သည်။CArpentry Power Toolsပါဝင်အိတ်ဆောင် polishing စက်,Drill Machine Kitစသည်တို့ကိုစသည်တို့
Curve သည် Metal နှင့် Nonferrous သတ္တုကိုဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဘယ်အချိန်မှာသတ္တုဖြတ်, chip စွန့်ပစ်ခြင်းစွမ်းရည်ပိုမိုအားကောင်းသည်။ လွှမ်းလုံးသည်ပိုမိုကြီးမားသည့်အခါသစ်သားနှင့်အခြားသစ်သားထုတ်ကုန်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၏ထိရောက်မှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ Carbon သံမဏိကွေးမြင်သည်မှာသစ်သားနှင့် nonmetal အမျိုးမျိုးကိုဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကွေးမြင်လျှင်အဆင်တန်ဆာမဟုတ်ပါဘူး. It အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောအခြေအနေအရ0ယ်သင့်သည်။
အဆိုပါကွေးမြင်သည်ဖြောင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း, မြို့ပတ်ရထားဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် arc ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သည်ထုံးchassis နှင့်စပီကာဖွင့်လှစ်), Bevel Edge Plywood, အမှုန်များနှင့် Hardboard ကဲ့သို့သောခိုင်မာသောသစ်သားအမျိုးအစားများနှင့်ကိုက်ညီရန် Curve Saws များကိုဓါးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Curve Saw အထူးသဖြင့်သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်တော်သည်။
Circular Saw သည် single-phase series searned motor ကိုပါဝါအဖြစ်အသုံးပြုသောကိရိယာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့နောက်စက်ဝိုင်းလည်ပတ်မှုအတွက်စက်ဝိုင်းကြည့် ဂီယာယန္တရားမှတဆင့်။ ၎င်းသည်လုံခြုံမှု, ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်မြင့်မားသောထိရောက်မှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်သစ်သား, MDF, blockboard နှင့်ပန်းကန်များစသည်တို့ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။စာချုပ်သစ်သားအပြောင်းအလဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ed ။
လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်Mompelfunctional လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်, ထွင်းသောစက်ဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်း၏ပုံသဏ္ is ာန်သည်သေးငယ်ပြီး၎င်း၏လည်ပတ်မှုသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ အဆင်ပြေသည်။ ၏အဓိကခန္ဓာကိုယ်Mini လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်0 မ်းသာသောဖစ်စ်နှင့်အတူဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုနှင့်အတူမော်တာတစ်ခုဖြင့်မော်တာတစ်ခုဖြင့်ရေးစပ်ထားသည်။ အဆိုအရလိုအပ်ချက်ဦးဝင်ခြင်းတူးစင်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်း, ကြိတ်ခြင်းခေါင်း, ခေါင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းစသည်တို့ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့သောလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာဖြတ်တောက်Blade ကိုအသုံးပြုသည် ကိရိယာပွန်ကြောင်း, ဖြတ်တောက်ခြင်း၏အချင်းဓါးရွက်သေးငယ်သည် 25 မီလီမီတာခန့်ရှိပြီးဖြတ်တောက်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ရန်အလိုတော်မှာပြောင်းလဲနိုင်သည်ပါးစပ်ပုံစံနှင့်အတူ။ အပေြာင်း ကျယ်ဝန်းခြင်း၏ ဖြတ်ခြင်း ပါးစပ်1 မီလီမီတာထက်မကျော်လွန်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်တော့လဲGrinder tool0.7 မီလီမီတာထက်နည်းသောသံစာရွက်ကိုဖြတ်တောက်သည်ဖြတ်ခြင်းမပူဘူး ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများနှင့်အတူဓါးရွက်ပေထိုအရာထိုကဲ့သို့သော IR အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများဖြတ်နိုင်ပါတယ်စာရွက်ပေါ်တွင်အလူမီနီယမ်စာရွက်, အလွိုင်းစာရွက်, သစ်သားစာရွက်, ပလပ်စတစ်စာရွက်နောက် ... ပြီးတော့။ ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါးရွက်နှင့် emery နှင့်အတူ emery နှင့်အတူ emery နှင့်အတူဖန်ခွက်နှင့်ကျောက်စိမ်းအပေါ် talve ပုံစံများကိုထွင်းထုနိုင်ပါတယ်။
ထောင့်ရှုခင်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းဘုတ်များ,လမ်းပြသံလမ်းများနှင့် lintels ။ ၎င်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုထောင့်နှင့်ခေါင်းစဉ်များဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအပါအ0င်မည်သည့်ဖြတ်တောက်မှုကိုမဆိုရရှိနိုင်ပါသည်။
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်များသောအားဖြင့်ဖြိုဖျက်ခြင်းအလုပ်အတွက်လုပ်ခြင်းအတွက်မဟုတ်ဘဲဖြိုဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနဲ့‘ကြမ်းတမ်းသော’ဖြတ်တောက်ခြင်း။ သူတို့သည်မည်သည့်တိကျသောဖြတ်တောက်ခြင်းမျိုးအတွက်မသင့်တော်ပါ။
ဒါကြောင့်သူတို့ကများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်လျှောက်ထားအဟောင်းကိုပြတင်းပေါက်ဘောင်များကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်သစ်ပင်အမြစ်များကိုပင်ဖြတ်တောက်ရန်။ ၎င်း၏ပုံသဏ္ of ာန်ကြောင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်စာချုပ်အခြားလျှပ်စစ်ကိရိယာများမရောက်ရှိနိုင်သည့်နေရာများကိုဖြတ်တောက်ရန် ED ။
ပိုလန်စက် grindh တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နှင့်လျှပ်စစ် tools တွေကို operatedသစ်သားမျက်နှာပြင် polishing သည်။ ၏စစ်ဆင်ရေး၏သော့ချက်Mini Grinder Pollerပျက်စီးသွားသောအလွှာကိုအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားရန်အမြင့်ဆုံး polishing မြန်နှုန်းကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် polishing ပျက်စီးမှုအလွှာသည်နောက်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမထိခိုက်သင့်ပါသေးငယ်တဲ့ polishing စက်.
ထို့အပြင်လက်တွေ့နှင့်လက်စ်အပါအ0င်သာမန်လက်ညှပ်ကိရိယာများရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, တိကျတဲ့လျှောက်လွှာသည်ထိုအချိန်တွင်အခြေအနေအပေါ်မူတည်သည်။
လက်သမားပါဝါကိရိယာများ အိတ်ဆောင် polishing စက် လျှပ်စစ် rotary tool ကို kit အသေးစားအိတ်ဆောင်လျှပ်စစ်ကြိတ်သမား MINI DIY လျှပ်စစ်ကြိတ်စက် Mini Hangher Mill Grinder Mini Grinder Tool ပိုလန်စက် grind Mini Grinder Poller သေးငယ်တဲ့ polishing စက်